Wajiga 1-aad ee gurmadka qaxootiga Yemen oo Lasoo gaba-gabeeyey iyo guddiga Qaranka oo Lacag wareejiyey[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wajiga 1-aad ee gurmadka qaxootiga Yemen oo Lasoo gaba-gabeeyey iyo guddiga Qaranka oo Lacag wareejiyey[Sawirro]
Waxaa lasoo gaba-gabeeyay wejigii koowaad ee lagu badbaadinayay qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Yeman, iyadoo loo diyaar garoobayo wejiga labaad ee badbaadinta dadkaasi.
Kulan ay maanta ku yeesheen magaaladda Bosaso labada gudi ee badbaadinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ay horkacayaan Culimada Soomaaliyeed ayaa lagu shaaciyey arrimahan.
Gudgiga ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan yabooha dhaqaale maadaama howlgalka nafbadbaadinta ah ee qaxootiga Soomaaliyeed loogu gurmanaayo uu sii socon doono, isla markaana loo baahan yahay in loo sii diyaar garoobo,iyadoo wejigiisa koowaad ay ku baxday inta badan lacagtii dadka Soomaaliyeed ay yabooheen.
Shiikh Nuur Baaruud Gurxan oo ah guddoomiyaha gurmadka qaxootiga Qaranka ayaa ku ammaanay dawladda iyo shacabka Puntland doorka muuqda ee wax u qabashada dadkan walaalahooda ah ee u baahan garab istaaga, waxaa kaloo uu xusay in wadashaqayn dhinacyo badan ay kala dhaxayso guddiga gurmadka qaxootiga ee Puntland.
Shiikh Nuur Baaruud gurxan oo ah gudoomiyaha gudiga gurmadka qaxootiga Yemen ee Qaranka ayaa ku wareejiyey guddiga taakuleynta qaxootiga Yemen lacag dhan lixdan iyo Sagaal Kun iyo Laba boqol oo dollar oo loogu talagalay in lagu anba bxiyo dadkii ugu danbeeyay ee Yeman laga soo badbaadiyay.
Gudoomiyaha guddiga taakuleynta qaxootiga Yemen Shiikh Axmed Daad ayaa ka mahadceliyey lacagta loogu talagalay dadkan walaalaha Soomaaliyeed ah ee u soo gaarsiiyey Sheekh Baaruud una duceeyey dadkii ku tabarucay.
Dhanka kale labada gudi ee u istaagay badbaadinta iyo wax u qabashada dadkan ayaa si rasmi ah loo mataaneeyey isla markaana si wadajir ah u wada qaban doonaan hawsha gurmadka.